Madaxweynaha Jubbaland oo Magacaabis sameeyay (Wareegto) – Banaadir Times
Madaxweynaha Jubbaland oo Magacaabis sameeyay (Wareegto)
By banaadir 7th June 2021 28 No comment
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa Wareegto kasoo baxday Xafiiskiisa waxaa uu Maanta ku Magacaabay Guddoomiyaha gudigga qoxootiga iyo barakacayaasha.
Wareegtada ayaa waxaa Eng Cabdi Xuseen Maxamed u magacaabay loogu Magacaabay in uu noqdo Guddoomiyaha gudigga qoxootiga iyo barakacayaasha, waxaana uu horay u soo noqday Wasiirka Wasaaradda warfaafinta Maamulka Jubbaland.
Sidoo kale Wareegtada Magacaabista ayaa waxaa lagu sheegay in markii la arkay baahida loo qabo in xal waara loo helo qoxootiga iyo barakacayaasha lana tashaday Madaxweyne kuxigeenka 1aad ee jubbaland uu xilkaasi Magacaabay.
Magacaabista Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ee Guddoomiyaha gudigga qoxootiga iyo barakacayaasha ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli degaano ka tirsan Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo uu ka fatahay Wabiga, isla markaana dad badan ay ka barakaceen.
Imaaraadka & QM oo ka wada hadlay Arrimaha Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo horleh geeysay Dhuusamareeb
Beesha Caalamka oo soo jeedisay in si deg deg ah loo qabto hanaanka doorashada Soomaaliya
By banaadir 28th May 2021
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in heshiis laga gaaray doorashada
By banaadir 26th May 2021
Soomaaliya & Azerbaijan oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah
By banaadir 12th June 2021